Yaa ku badiyay tartan aqooneedkii dhex-maray degmooyinka Marka VS Hilwaa? | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Yaa ku badiyay tartan aqooneedkii dhex-maray degmooyinka Marka VS Hilwaa?
Yaa ku badiyay tartan aqooneedkii dhex-maray degmooyinka Marka VS Hilwaa?
Muqdisho (SNTV)-Degmooyinka Marka iyo Hilwaa oo ka kala tirsan Shabeelaha Hoose iyo Benaadir ayaa caawa wacadaro muujiyay kadib tartan aqooneedkii dhex maray.
Degmada Marka oo xarun u ah gobalka Shabeelaha Hoose ayaa la weydiiyay 7-su’aalod, dhammaan su’aalihii loogu tala galay midna kama aysan jawaabin balse waxa ay si ka faa’ideysi a u heleen mid kamid ah su’aalaha soo dhinac maray Hilwaa, waxa ayna sidaas ku heleen 2-dhibcood.
Degmada Hilwaa ayaa su’aalihii 7-ahaa oo ay xaqqa u lahaayeen laba kamid ah ka jawaabay, sidoo kale waxa ay saxeen mid kamid ah su’aal fursad ah oo ay lumiyeen Marka, waxa ayna sidaas ku xaqiijiyeen 6-dhibcood.
Inkastoo ay cabasho la yimaadeen degmada Marka, hadane waxa ay ugu dambeen si cad u sheegeen in ay ka qanceen guddiga, waxaa caawa wareegga 1-aad ee tartanka ku haray Marka halka Hilwaa ay xaqiijisay wareegga 2-aaad.
Habeen dambe tartan aqooneedka bisha Ramadan oo ay tabineyso warbaahinta Qaranka isla markaan uu taaba gelinayo Maamulka Gobalaka Benaadir, waxaa ku wada ballansan degmooyinka Jowhar iyo Howl-wadaag oo ka kala tirsan Shabeelaha Dhexe iyo Benaadir.
Previous articleDufaanta Mekuku oo laga cabsi qabo inay gaadho Waddamo hor leh
Next articleXil ka qaadis iyo magacaabis Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka